ယူအက်စ်အေ က ရေကာတာ ဆည်တွေ – USA DAMS AND RESERVOIRS II | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Education » ယူအက်စ်အေ က ရေကာတာ ဆည်တွေ – USA DAMS AND RESERVOIRS II
ယူအက်စ်အေ က ရေကာတာ ဆည်တွေ – USA DAMS AND RESERVOIRS II
Posted by Kyaemon on May 28, 2012 in Education, Know-How, DIY, Style & Beauty, Think Different, Think Tank, Travel | 12 comments
USA Dams and Reservoirs
USA ယူအက်စ်အေ က ရေကာတာ ဆည်တွေလေ့လာရအောင် – ဒုတိယပိုင်း
Hoover ဟူးဗား ရေကာတာ ရဲ့ ညရှူခင်း
၂၀၁၁ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၃၀ ရက် ဆိုရင်
ဟူးဗား ရေကာတာ ဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနား ရဲ့
သက်တမ်း ၇၆ နှစ်မြောက် နေ့ဖြစ်တာ၊
Arizona ပြည်နယ်နဲ့ Nevada ပြည်နယ်တို့ရဲ့ နယ်ခြားရှိ
Black ဘလက် (အနက် ရောင် ) တောင်ကမ်းဘား Colorado ကိုလိုရာဒို မြစ်ကမ်းနားမှာ
၁၉၃၅ ခုနှစ်တွင်သမတ Franklin Roosevelt က ဖွင့်လှစ်တာ၊
ယင်းနေရာတွင် ၁၉၃၁ ကစတင်ပြီး ၁၉၃၆ ထိ ၅ နှစ်ကြာဆောက်လုပ်ရတာ
Photos: Construction of Hoover Dam
Las Vegas နဲ့ဆက်တဲ့ရထားလမ်း ဖောက်ဘို့
၁၉၃၀ စက်တင်ဘာ ၁၇ ရက် က အလုပ် စတဲ့အခမ်းအနား
ဝန်ကြီး Wilbur က ငွေထယ်နဲ့လုပ်တဲ့သံချောင်း ကို
မြစ်ရေကိုလမ်းလွှဲဘို့ တောင်ထဲကို လှိုဏ်ဂူ လမ်းကြောင်းဖောက်တာ
အင်းဂတေ Concrete ကွန်ကရစ် အဆောက်အအုံ အထပ်လိုက် တွေနဲ့ရှေ့က ပစ်စည်းသယ်ပေးတဲ့ Truck ထရပ် ကားတွေ
ဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်သမားတွေအုပ်စုလိုက် နေ့ညမပြတ် မရပ်မနား လုပ်ကြတာ၊
အလယ် က မဆက်ဘဲ ခြားထားတာ က အင်းဂတေတွေ ကိုပိုခြောက်နိုင်အောင် ထားတာ
ရှေ့ကအိမ်အဆောက်အဦ တွေက ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ရုံတွေ ဆောက်နေ တာ
ရေဝင်ပေါက် မျှော်စင်ကြီး ၄ လုံး၊ တဘက် ၂လုံး စီ ထားတာ၊၃၈၀ ပေ အမြင့်ရှိကြ တာ
ရက်စွဲမပါ မိုးကောင်းကင် ကရိုက်ချက်
၁၉၃၆ မတ် လ ၁၃ ရက် မိုးပေါ်က ရိုက်တာ၊
အဆောက်အအုံက ၇၃၁ ပေမြင့် တာ၊
အဝေးဘက် က Lake Mead ရေလှောင်ကန်
အဲဒီ ဘက်က မျှော်စင်တွေမှရေသွင်းတာ
ဓာတ်ပုံရှေ့ဘက် က ရေတွေ စီးဆင်းပြီးထွက်လာတာ
တစက်ကန့် ဆိုရင် ရေဂါလံ ထောင်နဲ့ချီအဟုန်ပြင်းစွာပန်းထွက်လာတာ
Feb 7, 1939 တုန်းက ကမ်ဘာမှာအကြီးဆုံး Generator တွေ
လစဉ် ၁၃၀,၀၀၀,၀၀၀ kilowatt hours ကီလိုဝက်ဒ် ဓာတ် အား ထုတ်နိုင်ပြီး
$ ၂၉၀,၀၀၀ ရတာ၊
၂ နှစ်အတွင်းမှာ $ ၃,၂၉၇,၂၈၉ ရခဲ့တာ၊
ထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းအား ရဲ့ ၃ ချိုး ၁ ချိုး နဲ့ဟိုချိန်တုန်းကခုတ်မောင်းခဲ့တာ
Feb 26, 2004 က အခါအားလျော်စွာ စစ်ဆေးစမ်းသပ်ချက်
အမြင့်၈၉၀ ပေ အလျား ၁၉၀၀ ပေရှိ တဲ့တံတား ကို October 26, 2010 နေ့ကဓာတ်ပုံရိုက်တာ
၂၀၀၃ကစတာ October 19, 2010 နေ့မှာဖွင့်တာ၊
ရေကာတာ ကကားတွေ တံတားဘက်လွဲ ဘို့လုပ်တာ၊
မိုင် ၄ ပုံ တ ပုံ အလှမ်း မှာ သွားဆောက်တာ
သိတဲ့အတိုင်း ဘဲ ပုံ ၅၄ ပုံရှိလို့ ကျန်ဓာတ်ပုံ ကြည့်ဘို့ လင့်ခ ကိုနှိပ်ပါ
Video လင့်ကိုရိုက်ပါ၊ ရေကာတာ ရဲ့ရာဇဝင် ကို ရှင်းပြ တာ
Hoover Dam . Preview . American Experience . WGBH | PBS
Wikipedia ဝီးကီးပဒီးယား က link လင့်ခ ကို နှိပ်ပါ သိလိုတာတွေ ရှင်းပြထားတာ၊
ဓာတ်ပုံပါ အကြောင်းအရာ တွေကလဲ အပေါ်က ဓာတ်ပုံတွေ နဲ့ခပ်ဆင်ဆင်ပါ၊
ပုံတွေ လှလွန်းလို့ ထပ်တင်လိုက်တာ
made in usa ဆိုမှတော့ ရှယ်ပြီပေါ့ဗျာ
မြန်မာမှာ ရေကာတာဆောက်ဖို့ အမေရိကန်တွေ ကူညီပေးလာရင် အရမ်းပျော်မိမှာဘဲဗျို့။
အဲဒါကြီးဆောက်လဲပြီးရော လှုပ်လိုက်တဲ့ ငလျင်တွေ အခါ 5000 ကျော်တယ်ဆိုပဲ
အမေရိကား မှာ အဲဒီလို မဟုတ်ပါ၊
ကောဠဟာလ တွေ နားကြားတွေ
တောင်ပြောမြောက်ပြော တာတွေ ကို
မဟုတ်တာ အခြေအမြစ်မရှိတာ ဆိုရင်
ခု “ငလျင် ၅၀၀၀” ဆိုတာ
ငလျင်တွေရဲ့ အတိုင်းအတာ Richter Scale၊
စာရှူပရိသတ် အတွက် မေးကြည့်ပေးပါ၊
မနေ့ဂ အီတလီမှာ ၅.၈ရစ်ခ်ျတာစကေး ငလျင်အလတ်စား လှုပ်သွားဒါ လူ၁၅ယောက်သေပြီး ၃၅၀လောက် ဒဏ်ရာရသွားသဒဲ့…။ မြစ်ဆုံရေကာတာ နေရာမှာ ငလျင်လှုပ်ခဲ့ရင် ပျက်ဆီးဆုံးရှုံးမိ အဆပေါင်းများစွာ ပိုနိုင်ဒယ်ဆိုရင် ကောလာဟာဠလို့ ပေါအုံးမှာလား ကြေးမုံဂျီး…။ ပြီးဒေါ့ အဲဒီ မြစ်ဆုံနေရာဂ ငလျင်ကြောနဲ့ လွတ်လွတ်ကင်းကင်း မရှိဘူးလို့ သဒင်းတခုမှ ဖတ်ဖူးတယ်။ သဂျီးဂို သွားမမေးနဲ့နော်.. သူနေတဲ့ အယ်လ်အေနဲ့ မြစ်ဆုံ အဝေးဂျီးမှ အဝေးဂျီး…။ ကြေးမုံဂျီးနဲ့ အမှန်တရားလိုဗဲ…။
ရက်ကတော့ မမှတ်မိတော့ဘူးဗျ …5Plus ရုပ်သံလိုင်းမှာ လွှင့်သွားတယ် … ကျွန်တော်လဲ စိတ်ဝင်စားလို့ ထိုင်ကြည့်နေတာ …. ပြီးခါနီးလေးမှာ ပြောသွားတာပဲ …. ငလျင်အမျိုးအစား ပေါင်းစုံ 5000 ကျော်လောက်လှုပ်သွားတယ်တဲ့ …. အဲဒီတမံတည်ဆောက်ပုံ တွေပါ အကုန်ပြောသွားတာ … တော်တော်ကြည့်လို့ကောင်းတယ် …
မြန်မာပြည်လုပ်ငန်းရှင်ဘ၀မှ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု သမ္မတကြီးသို့ ((Herbert Clark Hoover))
Hooverသည် နေရာမျိုးစုံ၊ဘ၀မျိုးစုံကြုံတွေ့ခဲ့ရပြီး Satand Ford Universityမှသင်ယူခဲ့သောပညာ၊မြန်မာပြည်တွင်ရှာဖွေခဲ့သော ဥစ္စာဓန နှင့် လုပ်ငန်းအသီးသီးမှရခဲ့သောအတွေ့အကြုံတို့ကို အခြေခံပြီးနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ထဲခြေစုံပစ်ဝင်ခဲ့ရာ ၁၉၂၈တွင် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏ ၃၁ယောက်မြောက်သမ္မတဖြစ်လာခဲ့သည်။
သမ္မတကြီးHooverအုပ်ချုပ်စဉ် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသည်ကြီးစွာသောအခက်အခဲကြုံခဲ့ရသည်။ယင်းအခက်အခဲမှလွတ်မြောက်ရန် Hooverသည် stimulateစီမံကိန်းများစွာ
ချမှတ်လုပ်ဆောင်ခဲ့ရာ Arizona Stateနှင့်Nevada Stateအစပ်ရှိ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံရေကာတာကြီးလည်းပါဝင်ခဲ့သည်။အဆိုပါရေကာတာကြီးကို သမ္မတကြီးHooverအားဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့် Hoover Damဟုယနေ့တိုင်ခေါ်ဆိုနေကြဆဲဖြစ်သည်။
***ဗီဒီယို တွေ ကြည်ဘို့လင့်ခတွေ ကိုနှိပ် ပါ***
ဟူဗား ရေကာတာ အရေးကြီးပုံကို အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ကိုယ်တိုင်ရှင်းပြတာ၊
ပြီးတော့ အတွင်း ကြကြ တောင်ထဲလှိုင်ဂူ က ရေသွယ်ပိုက်ဧရာမကြီးတွေနဲ့
Visit the Hoover Dam in the United States
ဧည့်သယ်တွေ လာလည်ကြဘို့ ကျော်ငြာဗီဒီယိုထဲက နမူနာအလှရှုခင်းများ
ရဟတ်ယာဉ်ကိုအမြဲတစေ သေချာစွာ ထိန်းသိမ်းပြင်ဆင်ထားတာနော်